Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Israa’iil Wararka Jebinaya » Israa'iil Oo Dib U Furtay Safarrada Caalamiga ah
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Israa’iil Wararka Jebinaya • News • Ammaanka • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Markii ugu horreysay muddo ka badan siddeed iyo toban bilood, shakhsiyaad iyo koox- socdaalayaal ah oo ka yimid Maraykanka iyo Kanada waa lagu soo dhaweynayaa inay galaan Israa'iil oo ay sahamiyaan dhaqanka qani ah ee waddanka, taariikhda, iyo muuqaallada cajiibka ah
Israa'iil waxay dib u furtay xudduudaha booqdayaasha Mareykanka iyo Kanada.
Tilmaamaha cusub ee gelitaanka waxay u baahan yihiin in la qaado tijaabada PCR 72 saacadood ka hor inta aan la dhoofin iyo in la qaado tijaabada PCR marka la yimaado Israa'iil iyadoo la raacayo karantiil.
Wasiirada Israel ayaa sameeyay qorshaha kor ku xusan kaas oo ay ansixiyeen golaha wasiirada ee COVID wuxuuna dhaqan gali doonaa Noofambar 1, 2021.
The Wasaaradda Dalxiiska ee Israel ayaa ku dhawaaqay in laga bilaabo maanta, dalxiisayaasha la tallaalay ee ka yimid Mareykanka iyo Kanada ay dib u bilaabi karaan dhammaan safarada Israel. Ka dib markii la bilaabay barnaamijka dib-u-furista tijaabada bishii Maajo 2021, kaas oo markii hore u oggolaaday tiro koox dalxiis ah inay soo galaan dalka, dhammaan safarrada la tallaalay ayaa hadda booqan kara Israa'iil ka dib xiritaanka dheeriga ah ee COVID-19.
"Inaan niraahno waan ku faraxsanahay in Israa'iil ay dib ugu furto dadka socotada ah maanta waa wax aan la dhayalsan karin," ayuu yiri Eyal Carlin, Guddoomiyaha Dalxiiska ee Waqooyiga Ameerika. "Israa'iil waxay qaadday tillaabooyin cajiib ah si ay u ilaaliso dadkeeda iyo soo-booqdayaasha waxaanan ku hanweynahay inaan hubinno safar aan la ilaawi karin oo COVID-ammaan ah. Iyada oo hormuud u ah heerarka tallaalka iyo fursadaha aan dhammaadka lahayn ee hawlaha bannaanka, waxaan aad u xiisaynaa inaan ku soo dhaweynno soo-booqdayaasha gacmo furan -dabcan, masaafada bulsheed ee badbaado leh."
Raiisel wasaaraha Israa’iil Naftali Bennett oo ay weheliyaan dhowr wasiir oo kale oo dalka gudihiisa ah (Dalxiiska, Caafimaadka, Gaadiidka, iwm.), ayaa isu yimid oo sameeyay qorshahan soo socda kaas oo ay ansixiyeen golaha wasiirada ee COVID wuxuuna dhaqan geli doonaa maanta oo ah November 1 – iyadoo Horumarka iyo noocyada cusub ee COVID si dhow ayaa loola socdaa.
"Waxaan sugeynay waqtigan, si aan dib ugu soo celino safarro caalami ah dalkeena, waqti aad u dheer," ayuu yiri Yoel Razvozov, Wasiirka Dalxiiska Israel. "Waan ku faraxsanahay inaan qof walba la wadaagno waddankeena mar labaad, waxaana ku faraxsanahay inaan si dhow ula shaqeynayo Ra'iisul Wasaare Naftali Bennett oo ka mid ah Wasiirada kale ee dalka si loo xaqiijiyo soo laabashada dalxiiska, oo badbaado leh."
Laga bilaabo maanta, tilmaamaha gelitaanka waxaa ka mid ah:
Qaadashada tijaabada PCR 72 saacadood ka hor duulista dibadda, buuxinta cadeynta rakaabka, iyo qaadashada tijaabada PCR marka ay timaado Israel (loo baahan yahay in lagu karantiilo huteel ilaa ay natiijadu ka soo noqoto ama 24 saacadood ka gudbaan - ka yar labada).
Si aad dalka u soo gasho, waa in:
Lagu tallaalay laba qiyaasood oo ah tallaalka Pfizer ama Moderna ugu yaraan 14 maalmood ka hor maalinta gelitaanka Israa'iil (14 maalmood waa in ay ka soo wareegtay markii la helay qiyaasta labaad markii la soo galay Israa'iil, laakiin wax aan ka badnayn 180 maalmood ka dib markii Israa'iil - ie, haddii ay lix bilood ka soo wareegtay qiyaasta labaad, waxaad u baahan doontaa tallaalka xoojinta si aad u gashid).
Kuwa helay qiyaasta tallaalka xoojisa, oo ugu yaraan 14 maalmood ka soo wareegtay markii la helay, waxay geli karaan Israa'iil.
Waxaa lagu tallaalay hal dose oo ah tallaalka Johnson & Johnson ugu yaraan 14 maalmood ka hor maalinta gelitaanka Israa'iil (14 maalmood waa inay ka soo wareegtay tan iyo markii la helay qiyaasta labaad markay yimaadeen Israa'iil, laakiin wax aan ka badnayn 180 maalmood markay Israa'iil ka baxeen - ie., haddii ay lix bilood ka soo wareegtay qiyaastaada labaad, waxaad u baahan doontaa tallaalka xoojinta si aad u gashid).
Ka soo kabsaday COVID-19 oo soo bandhigay caddaynta natiijooyinka baaritaanka NAAT ee togan ugu yaraan 11 maalmood ka hor maalinta gelitaanka Israa'iil (in aan ka badnayn 180 maalmood markay Israa'iil ka baxayaan).
Waxay ka soo kabteen COVID-19 oo waxay heleen ugu yaraan hal dose oo ah tallaalada ay ogolaatay WHO.
Tilmaamo qoto dheer ayaa la heli karaa HALKAN. Intaa waxaa dheer, fadlan booqo https://israel.travel/ Wixii ku soo kordha wararka ku saabsan borotokoolka gelitaanka iyo jawaabaha soo socda ee FAQs
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan safarka Israel ama si aad u qorsheysato safarkaaga, booqo https://israel.travel/. Si loo dhiirigaliyo, raac Wasaaradda Dalxiiska ee Israa'iil Facebook, Instagram, iyo Twitter.